तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा परिएला ! - Chandragiri News
Home ब्रेकिंग न्युज तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा परिएला !
२०७८, १६ भाद्र बुधबार १४:५१
काठमाडौँ, भदौ १६ गते । काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईं तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने होसियार ! अब महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यसरी गाडी हाँक्नेविरुद्ध रातिमा पनि कारबाही सुरु गरेको छ ।
Previous articleउपत्यकामा हट्यो निषेधाज्ञा, जात्रा महोत्सव गर्न नपाउने
Next articleकोरोना महामारीः नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित